Izinyoni zezinqolobane zosuku
Uhlu Lokuhlola Lokuhlola likaPetru
Lawula abaphili bokuphila
imibiko yami i-myAvibase
Dlulisa amehlo ngemindeni
Nika isandla ku-Avibase
Amalungu eqembu le-Flickr
I-Avibase iyatholakala nangezilimi ezilandelayo:
Nika ukuhumusha okungcono
Ukuhunyushwa kwaleli khasi kugcwaliswe ngosizo lweThuluzi lokuhumusha elizenzakalelayo le-Google. Nika ukuhumusha okungcono
Siyakwamukela Isivakashi | Ngena ngemvume | Bhalisa | | myAvibase | Phuma
Inqubomgomo yobumfihlo ye-Avibase
I-Avibase iyinhlangano ye-non-commercial eyabanjelwa eCanada, ezinikele ngokuyinhloko ukuqoqa nokwabelana ngolwazi mayelana nezinyoni zomhlaba. I-Avibase ayiqoqi noma isebenzise ulwazi lomuntu siqu mayelana nabasebenzisi bayo nezivakashi ngenjongo yokuhweba. Noma kunjalo, ukuqoqa ulwazi oluthile lomuntu siqu olulisebenzisa ngezindlela ezilandelayo.
Okokuqala, ngamakhasi adinga ukuqinisekiswa komsebenzisi (ukungena ngemvume nephasiwedi, njenge-MyAvibase nethuluzi lezinsiza zewebhu le-Avibase), sigcina ikhukhi ehlala kuphela kwikhompyutha yakho ngenhloso yokugcina iseshini sakho. Uma udala iphrofayela yomuntu siqu ye-Avibase, igama lakho, ikheli le-imeyili, ulimi nezinye izintandokazi, kanye nezinhlu zakho zokubukwa ezihlotshaniswa nezinhlu zakho zokuhlola, zizogcinwa ngaphakathi kwamaseva ethu. Lolu lwazi ngeke lwabiwe nabesithathu futhi lusetshenziselwa kuphela ukukukhomba ngenkathi usebenzisa isayithi le-Avibase. Igama lakho lingaboniswa emiphumeleni yomphakathi (isb. Ababukeli abaphezulu babika), kodwa ungacela ukukhipha igama lakho kuphrofayela yakho. Futhi, noma nini, susa iphrofayela yakho nayo yonke imininingwane ehambisanayo, ngokuya kuphrofayela yakho ye-Avibase bese uchofoza ku- "Susa iphrofayela".
I-Avibase iphinda isebenzise i-Google Analytics, isevisi ye-analytics yewebhu eyenziwe yi-Google, Inc. I-Google Analytics isebenzisa amakhukhi, amafayela wombhalo afakwa kwikhompyutha yakho, ukusiza iwebhusayithi ukuthi ihlaziye indlela abasebenzisi abasebenzisa ngayo isayithi. Ulwazi olwenziwe yi-cookie mayelana nokusebenzisa kwakho iwebhusayithi (kufaka phakathi ikheli lakho le-IP, nakuba lokhu kufanele kunqunyelwe ngoba sithembele kwisici se-IP sonyunyiso) sizodluliselwa futhi sigcinwe yi-Google kumaseva e-United States. I-Google izosebenzisa lolu lwazi ngenhloso yokuhlola ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi, ukuhlanganisa imibiko yomsebenzi webhusayithi ye-opharetha bewebhu kanye nokunikeza ezinye izinsizakalo eziphathelene nomsebenzi webhusayithi kanye nokusetshenziswa kwe-intanethi. I-Google ingaphinde idlulisele lolu lwazi kubantu besithathu lapho kudingeka khona ngokwenza umthetho, noma lapho labo bantu abathathu benza ulwazi ngolwazi lwe-Google. I-Google ngeke ihlanganise ikheli lakho le-IP nanoma iyiphi enye idatha egcinwe yi-Google. Unganqaba ukusebenzisa amakhukhi ngokukhetha izilungiselelo ezifanele kusiphequluli sakho, kodwa sicela uqaphele ukuthi uma wenza lokhu ngeke ukwazi ukusebenzisa ukusebenza okugcwele kwaleli sayithi. Ngokusebenzisa lewebhusayithi, uyavuma ukucubungula idatha mayelana nawe nge-Google ngendlela kanye nezinhloso ezibekwe ngenhla.
Ngivame ukuvuma ngegama wonke abanikeli abangisize ngithuthukise i-Avibase eminyakeni edlule. Uma igama lakho livela ekuvumeni, kodwa ungathanda ukususa, sicela nje uxhumane nami . Uma unomuzwa wokuthi igama lakho kufanele libe khona, sicela futhi ungitshele, lokhu ngokuqinisekile kuyinhlangano engibheke ngayo (ngicela uxolise!).
I-Avibase yi-copyright kaDenis Lepage. Imvume inikezwe ngokucacile ukwenza izixhumanisi kunoma yiliphi lamakhasi esayithi, kufaka phakathi, kodwa kungagcini, uhlu lokuhlola lwesifunda kanye namakhasi wephrofayela wezinhlobo.
Izithombe nezithombe ezikhonjiswe ngaphakathi kwe-Avibase zonke zihambisana ne-copyright yomlobi wazo wangempela, ngaphandle uma kuboniswe ngenye indlela ngegoli yelayisensi yokudala. Zonke izithombe ezivezwe Flickr API zihlala zindawo zabanikeli babo bokuqala. I-Avibase ayilondolozi isilondolozi sezithombe zendawo kusuka ku-API, kodwa igcina izixhumanisi ezilinganisweni ezincane zesithonjana. Zonke izithombe zifaka igama lomlobi (njengoba kunikezwe ku-Flickr) futhi zixhunywe ekhasini lomlobi ku-Flickr. Izithombe kuphela ezibekwe uphawu lwe- ukusesha okusesidlangalaleni ngabalobi bazo kuboniswa ku-Avibase. Lokhu kujwayelekile ukubeka okuzenzakalelayo ku-Flickr, okungashintshwa ngumnikazi we-akhawunti.
Uma ungumthwebuli wezithombe ene-akhawunti ye-Flickr, futhi ungathanda ukucela ukuthi izithombe zakho zingabonakaliswa njengezithonjana ezise-Avibase, unezinketho okungenani ezimbili. Okokuqala, ungangena uxhumane nami ukucela ukuthi izithombe zakho zingabe zingaboniswa, futhi ngizojabula ukuziphoqa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Uma wenza kanjalo, sicela uphinde unikeze igama lakho le-akhawunti ye-flickr, ngakho ngiyakwazi ukubona nokusetha isihlungi ukuvimbela izithombe zakho ukuba zingaboniswa. Okukhethwa kukho okwesibili ukuguqula indawo yokubonisa yezinye izithombe noma zonke izithombe zakho ukuze zingatholakali usesho lomphakathi . Lokhu kungenziwa emhlabeni wonke ngaphakathi kwe-akhawunti yakho ye-Flickr, ngaphansi kwe- Ubumfihlo nemvume , noma isithombe ngasinye. Ngemva kokushintsha lokhu kulungiselelwa, izithombe zingaboniswa njenge ezingatholakali ku-Avibase, futhi ekugcineni zizosuswa ngokuphelele.
Izithombe ezisuka ku-Avibase banner zisetshenziswe ngemvume evela kubanikazi babo be-copyright, abavame ukukhonjwa ngokuhambisa imouse yakho ngaphezu kwanoma yiziphi izithombe noma ngokuchofoza esithombeni.
Imvume yokusebenzisa noma iyiphi yezithombe eziboniswe ku-Avibase ayikwazi ukunikezwa kimi futhi kufanele iceliwe ngqo kumnikazi we-copyright. Ezinye zezithombe ze-Flickr ziyatholakala ukuze zisebenzise ngaphansi kwelayisense ye-Creative Commons, kodwa kuwumthwalo wakho njengomsebenzisi ukuqinisekisa ukuthi yiziphi futhi ukuhambisana nemigomo yelayisensi ethile. Lolu lwazi luyatholakala kusayithi le-Flickr uma uchofoza isithombe.
Uma unezithombe ongathanda ukuzenza nge-Avibase, konke okudingeka ukwenze ukwenza lezo zithombe zitholakale ku-akhawunti ye-Flickr, futhi uqinisekise ukuthi iphrofayela yakho ivumela ukusesha kwangasese.
Ukubika okuqukethwe okungalungile
Uma ungathanda ukubika isithombe esingalungile esiboniswe ku-Avibase, indlela engcono kakhulu uma uqhafaza isithonjana sesikwele esincane esivela ngakwesokunxele ngaphansi kwezithombe. Ukusetshenziswa kwalokhu inkinobho kumele kukhawulelwe ekungeneni kwezimpawu nezithombe ezingabonakali izinyoni. Noma yiziphi izithombe ezibiwe ngale ndlela kuzogcina zibuyekezwe futhi zisuswe uma kufanelekile. Uma ufisa, ungabeka futhi ivoti kunoma yisiphi isithombe ngokuchofoza ibha ngezansi kwesithombe. Isilinganiso sokuvota sokuvota kuze kube manje kwezinye izivakashi (uma kusebenza) siboniswa ngezansi kwezithombe. Okokugcina, ungasebenzisa inkinobho yomcibisholo, ekhoneni elingezansi elingakwesokudla, ukuguqula isithombe kwesinye sezinhlobo ezifanayo okukhethiwe.
I-Avibase ivakashelwe 279,280,020 izikhathi kusukela mhla zingama-24 kuJuni 2003. © Denis Lepage | Inqubomgomo yobumfihlo